Warbixin: Siduu u dhacay Xasuuqii ka dhacay magaalada Al-khardhuum? – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Warbixin: Siduu u dhacay Xasuuqii ka dhacay magaalada Al-khardhuum?
On Jun 6, 2019 445 0
Gumaadkii milliteriga Suudaan u geystay dadka shacabka ah ayaa sii kordhay, iyadoona reer Suudaan ay wacad ku mareen iney sii wadi doonaan kacdoonkooda.
Isniintii lasoo dhaafay, maalin kahor munaasabadda Ciida, ciidamada milliteriga Suudaan waxay magaalada Al-khardhuum ee caasimadda wadankaas, ka geysteen gumaad wuxuushnimo oo ay ku laayeen inkabadan 100 ruux oo kamid ahaa dadka banaanbaxyada dhigayay.
Golaha milliteriga Suudaan oo hadda haya talada wadanka ayaa u muuqday mid soo qorsheeyey gumaadkan, waxaana aroornimadii Isniinta magaalada Al-khardhuum, gaar ahaan goobaha ay bananabaxyada ka dhigayeen shacabka lagu soo daadiyay ciidamo aad u badan.
Ciidamadan oo aad u hubeysnaa, kana koobnaa noocyada kala duwan ee milliteriga Suudaan ayaa billaabay iney xoog jidadka kaga qaadaan dhegxaan ay ku gooyeen dadka shacabka, iyagoona rasaas ooda uga qaaday dadkii goobta ku sugnaa.
Shacabka banaanabxyada ka dhigaya Suudaan oo aan hubeysneyn, ayaa weerarkan wuxuushnimada ah ee lagu soo qaaday waxaa ku gaaray khasaare culus, oo lagu tiriyay kii ugu culsaa tan iyo markii uu billowday kacdoonka Suudaan.
Inta haatan la hubo, 101 qof ayaa la xaqiijiyay geeridooda, waxaana kala bar meydadkaas uu milliteriga Suudaan ku daadiyay webiga An-niil, taas oo iyana ka dhigneyd fajiciso la yaab leh.
Golaha milliteriga Suudaan wuxuu si cad u beeniyay gumaadka ay ku kaceen ciidamadiisa, isagoona dhanka kale sheegay in qaar kamid ah askartooda ay dhinteen, kadib markii ay weerar kala kulmeen waxay ku tilmaameen kooxa qarbudaad waday oo ay ula jeedaan dadka shacabka.
Golaha milliteriga, wuxuu intaa ku daray iney diyaar u yihiin iney sii amba qaadaan wadahadallada ay kula jireen dadka shacabka ah, taas oo reer Suudaan ay ku micneeyeen jees jees iyo arin lagu siii banneysanayo gumaadka shacabka.
Kooxaha metalaya shacabka, ee wadahadallada kula jiray golaha millieriga, ayaa sheegay ineysan jirin wax wadahadal ah oo ay la gelayaan milliteriga, inta ay xaaladu sidan tahay, taas bedelkeedana ay sii wadi doonaan kacdoonka.
Dhakhaatiirta Suudaan ayaa sheegay in isbitaallada guud ee dalka la keenay dhaawacya aad u badan, oo kusoo waxyeelobay rasaasta bareerka ee ay ciidamada milliterigu ku fureen dadka shacabka ah.
Gumaadka ay milliterigu ku kaceen ayaa kusoo aaday, iyadoo madaxda ugu sareysa golaha milliterigu ay booqasho ku tageen wadamada Masar, Imaaraadka iyo dhulka Xarameynka, halkaas oo ay kula soo kulmeen madaxda wadamadaas, waxaana loo badinayaa iney soo heleen awaamiir ah iney xoog kula tacaamulanaa kacdoonka Suudaan.
Dowladahaas ayaa hormuud ka ah olole ballaaran oo ay reer galbeedka iyo madaxda Carabta ku doonayaan in lagu fashiliyo kacdoonnada ay dhigayaan shucuubta Muslimiinta, mana qarsoona kaalinta ay ka qaateen wadama dhowr ay horey banaanbaxyo uga dheceen.
Lama oga sida ay ku dambeyn doonto xaaladda wadanka Suudaan, waxaana reer Suudaan ay wacad ku mareen iney sii wadi doonaan kacdoonka tan iyo inta ay ka xaqiijinayaan ahdaaftooda. Culimada diinta Islaamka iyo hogaanka Jamaacaadka Jihaadiga ayaa reer Suudaan usoo jeediyay iney is hubeeyaan, si ay isaga difaacaan xadgudubyada uga imaanaya ciidamada milliteriga.
Axmad 3430 posts 8 comments